magangalyo-doonka- November Update 2018 | USAHello | USAHello
Macluumaadka soo socda updated dadka magangelyo doonka ah oo soo socda inuu Maraykanka.
updated on 19 November (November) 2018: Jooji Order Madaxweynaha Xaakim Degmo United States ee Up 19 December (December).
casriyaynta: Garsooraha ayaa sheegay in amarka madaxweynaha waa lid ku ah sharciga dalka Mareykanka. sharciga US bixisaa in dadka ku sugan dhulalka Mareykanka waxay xaq u leeyihiin in ay soo gudbiyaan codsiyada magangelyo. Si Aans in aad qabto in ay yimaadaan iyada oo dekedda entry. In 19 November, garsooruhu wuxuu sheegay in Mareykanka waa in ay raacaan sharciga.
Maalve ka dhigan tahay xalka cusub?
Waxaa loola jeedaa go'aan ka mid ah 19 November / November in Mareykanka waa in ay ka shaqeeyaan koorsada of doonka dadka uma iman iyada oo dekedda leh ee codsiyada entry. dalalka xal waa in la oggol yahay in ay dadka sida codsan. Laakiin go'aanka tani micnaheedu ma aha in la siiyo magangelyo. Waxaa weli waa mid aad u adag tahay in la helo magangalyo America.
Waxa ay taageertaa xaaladda qaxootiga ku saabsan xuquuqda Internet ee dadka magangalyo doonka ah in codsiga ilaalinta ee dalka Mareykanka.
Madaxweynaha Trump saxiixday amar in la xaddido dadka magangalyo doonka ah oo ku saabsan soohdinta koonfureed ee dalka Mareykanka. Qaraarkan cusub waxay bixisaa in dadka magangalyo doonka ah in ay dekedda ka soo galo dalka Mareykanka tagaan.
Daarida go'aanka habeenbadhkii on Friday bilaabi doonaan 9 November muddo 90 maalin maalmaha ka mid. Qaraarkan cusub ma khuseeyo carruurta aan qaangaarka ah.
Waa maxay tan micnaheedu dadka magangelyo doonka ah oo ku saabsan soohdinta koonfureed?
isbedelka Taas macnaheedu waxa weeye, in haddii ay ku soo gashay dalka Mareykanka meel dekedda entry mooyee, in aan loo oggolaan doonaa in ay soo gudbiyaan codsiyadooda magangalyo. Halkii, waa la xiri doonaa si sharci darro ah wadanka soo galaya.
sharciga US bixisaa in tahriibayaal dalban kartaa magangelyo marka ay ku jiraan dhulka Maraykanka. Sidaas xeerka cusub ee uu madaxweynaha u babac dhigaya kooxaha xuquuqda madaniga ah.
Waxaa jiray isbadal ku dhacay sharciyada dadka magangalyo doonka ah oo soo socda inuu Maraykanka. In 11 June 2018 , United States
Xeer Jeff Kulamo ayaa sheegay in dadka ka cararaya rabshadaha qoyska ama rabshadaha burcad dalalka asal ahaan ay guud ahaan waxaa loo ogolaan doonaa in ay soo gudbiyaan codsiyada magangelyo America.
Waa maxay tan micnaheedu magangalyo-doonka?
Altgieraly wuxuu saameeyaa dadka magangalyo doonka ah haddii aad ayaa u imanaya xadka u dhexeeya Mexico iyo Maraykanka. Waxaa laga yaabaa inaad ka nimid dal halkaas oo rabshado baandada ka dhigaysa in ay khatar ku ah nolosha. Ama qof dumar ah oo waxaa laga yaabaa in guriga rabshad si aad naftaada iyo caruurtaada ku hayso ammaanka tago. Sharciga cusub ayaa sheegay in aadan heli karin magangalyo sababo kuwa.
Aad u adag in la helo aqoonsi qaxootinimo ee America. Inta badan ma aha dadka magangalyo doonka ah ay aqbalaan. Sharcigu wuxuu dhigayaa in aad codsan kartaa magangelyo haddii aad qabto cabsi ah cadaadis maxaa yeelay,:
Xataa haddii aad soo socda mid ka mid ah sababahaas, waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in la caddeeyo in maamulka Immigration and Customs ee dalka Mareykanka (ICE).
Read page dowladda si ay u badan oo ku saabsan xeerarka codsigaaga magangalyada u bartaan
Sida loo dalbado magangalyada – Warbixin ka socota xarunta qaxootiga ee internetka
Maxaa dhici doona igu haddii aad timaadid soohdinta magangelyo mid ka mid ah sababahan?
Dhamaan dadka magangelyo doonka ah waa in magangelyo-doonka waa inay ogaadaan in ay xidhi karo dowladda Maraykanka (Qasbi karo in ay sii joogaan xarunta xabsiga) Waayo, dhowr toddobaad. Dadka qaar ayaa la soocay carruurtooda marka ay yimaadaan xuduuda. Tan iyo markii ay 20 June, taas looma ogola. Waxaa jira kooxo ka shaqeeya dalka Mareykanka si ay uga caawiso waalidiinta heli carruurtooda. Laakiin waxaa jira in yar in qof kasta samayn karto si aad adiga ama carruurtaada ku caawin haddii aad horay lagu qabtay by United States Dowladda.
Waxaad leedahay in aad weydiisato qareen. In Maraykanka, waxaad xaq u leedahay in talada, laakiinse waa inaad weydiisataa qareen. Waa in aad ku odhan “Waxaan doonayaa in aan la hadlo qareen hadda”. baahida Continued qof kasta oo aad la hadasho isaga la qareen ilaa aad ka hesho xaq u leeyahay helitaanka qareen.
Maxaa dhacaya haddii aan soo maray oo aan wareysi? Ma waxaad weli xiray?
Haddii aad dhaaftay wareysi magangelyo (loo yaqaan “Khvfa Mvsvqa in”) , Waxaad ka heli doonaa dhageysi garsoore si aad kiiska magangelyada. Waxay qaadan kartaa waqti aad u dheer si aad u hesho dhagaysi. Waa in aad sii daayo inta ay sugayaan.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah xarumaha dadka lagu hayo ee haysta dadka magangelyo doonka ah xitaa ka dib markii wareysi uu ka soo gudbeen. In 2 July / July, garsoore federaalka ayaa sheegay in ICE waa in aan lagu koobin dib markii magangalyo-doonka la waraystay sabab la'aan. Haddii aad u xanniban ka dib wareysiga maraya, waxaadna codsataa in aad qareen la hadasho.
Ma waxaad ka ilmahaaga soocay?
Xaaladaha qaarkood, caruurta la kala magangalyo-doonka ka waalidkood.
Haddii aad kala aabbahaa ama ilmahaaga inta lagu jiro codsiga magan, warbixinta line xiriir ah lagu hayo ee dalka Mareykanka macluumaadka socdaalka iyo caadooyinka ka (ICE) AStiradaasi li 1-888-351-4024. Waxaa jira shaqeeya Isbanishka ku hadla laga heli karaa adeeg lacag la'aan ah. saacadaha shaqada laga bilaabo Isniinta ilaa Jimcaha laga bilaabo 8:00 ahay in 8:00 Evening. (Eastern Time). Haddii aad ka soo wacayso gudahood ICE xarunta dadka lagu haayo, isticmaali tirada dial xawaaraha 9116 # On madal isgaadhsiinta xorta ah.
Shaqeynta Xafiiska ICE of Refugee-dejinta (ORR) Si aad u heshaan carruurta. Waxaad kaloo la xiriiri kartaa khadka tirada ORR Waalidka 1-800-203-7001 Haddii aad u malaynayso in dawladda Maraykanka ilmahaaga D یھ a. Haddii aad ka soo wacayso ICE xarunta dadka lagu haayo, isticmaali tirada dial xawaaraha 699 # On habka isgaarsiinta ee bilaashka ah. Available 24 Saacadood maalintii, 7 Maalmood usbuucii, in Isbaanish ama English.
Waxa kale oo aad sameyn kartaa in (Ama saaxiibadaa ama xubno ka tirsan qoyska ama qareenkaaga) La xiriir ICE ama ORR via e-mail:
E-mail ORR on info@ORRNCC.com